Semalt: Ịlụ ọgụ na izere ozi Emmanuel
Ọ bụla ntanetị ịntanetị na-ezute nzuko ọjọọ. Ọtụtụ ndị na-eji weebụ nakwa ụbọchị na-eche ọtụtụ ozi ịntanetị nke na-azọrọ na ha na-enye otu ọrụ. Ndị Spammers na-eleba anya na ebe nrụọrụ weebụ, nakwa nke ukwuuozi ndị ọzọ bara uru. N'oge gara aga, ndị spammers ejirila ọtụtụ okwuntughe na ozi nkeonwe, tinyere akụkụ ndị ọzọ dị iche ichenke ijide n'aka na ebe nrụọrụ weebụ na-arụ ọrụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ha nwekwara ike iweta e-azụmahịa ala, na-eduga ná nnukwu ụgwọ e-azụmahịa - ridaex tv reviews. SEO niileMgbalị nwere ike ịdakwasi n'ihi mwakpo nke spam n'ezie.
Ịhapụ ịntanetị nwere ike ịbụ ihe amamihe dị na ya karịsịa maka ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ. Onye isiNjikwa Ihe Nlekọta Ahịa nke Ọkachamara ,Jack Miller, na-akọwa ụzọ ụfọdụ ị ga - esi lụ ọgụ ma pụọ ​​na spam:
1. Jiri adreesị ozi-e echedoro
Ihe nchebe nke onye na-eweta ịntanetị nwere dị mkpa.Dị ka ọmụmaatụ, ha nwere ike ime ka ndị ọrụ na-enwe nsogbu nke ojoro ma ọ bụ kwalite ọrụ nke ndị spammers. Ọ dị mkpa ịtụle iji nchekwaadreesị ozi ịntanetị. Gmail na Outlook nwere ụfọdụ n'ime adreesị ozi-e kachasị edobe taa. Ndị ọzọ nwere ike hụ na nchekwa nkekọmputa na-eji usoro nlekọta nchedo kachasị ọhụrụ.
2. Debe adreesị email gị nke ọma
Ọ bụla spammer na-amalite site na-eme nchịkọta ọtụtụ adreesị email..Ndị a bụihe mgbaru ọsọ ha na-etinye na mgbochi spam. E nwere usoro IT dị iche iche maka ịhazi na ịmepụta spam. Ị nwere ike iji email dị icheadreesị maka ngwa ntanetị dị iche iche. Ọzọkwa, enwere mgbe nhọrọ nke gụnyere ọtụtụ nchekwa na adreesị ozi-e gị dị ugbu a.Ụdị a nwere ike ịnwe ozi ịntanetị spam na folda nke ị nwere ike nyochaa ngwa ngwa, ma ghara ịkọghasị ha na email dị mkpa.
3. Jiri nzacha spam
site na n'elu, ọ dị mkpa iji usoro nkwụnye ozi email echekwara. Emailndị na-enye dị ka Gmail nwere nzacha spam nke nwere ike nyochapụ ụfọdụ ọgụ kacha mma. Spa ntanetị chọpụta na ịpị ozi ịntanetịspam na folda spam, ebe ị ga-enwe ike ịchọta onye n'ime ha nwere ike ijere gị ozi.
4. Ejila njikọ njikọ na spam
Site n'echiche a, o doro anya na ozi ịntanetị spam nwere ọtụtụ URLs dị iche icheọrụ. Ihe ndị a nile sitere n'aka ndị mmadụ dịka ndị na-agba ọsọ, ndị nwere ezi ihe kpatara mgbasa ozi email. The spam ozi ịntanetịnwere njikọ nke na-ezo aka na ngalaba obi ọjọọ. Ha nwere ike ime ụfọdụ ọrụ mbanye anataghị ikike dị ka ịdebe nchọgharị onye ahụgaa na ngwaọrụ Linux na-abanye na ha.
E nwere ọtụtụ ụdị spam n'elu weebụ. Ọtụtụ ndị n'Ịntanet na-enweta spam naọrụ ha kwa ụbọchị. Emails nwere spam sitere na ndị nwere ihe ọjọọ na ihe ọjọọ na-akpata n'azụ ndị ahụ.Spam na-eburu ọtụtụ puku ego site n'aka ndị ọrụ ịntanetị. Ichere spam nwere ike ịchekwa azụmahịa gị na nkwụnye ego yanchekwa nke onwe onye data ahịa. Ụfọdụ n'ime ụzọ ị ga - esi lụ ọgụ na izere spam na - eduzi. Ị ga-enwe ike ịchịkwaonwe gị yana nchekwa nke ebe nrụọrụ weebụ gị site na spam. I nwekwara ike ịmefu spam pụọ na saịtị ma ọ bụ ndị ahịa.